Doorashada USA: Donlad Trump oo markale ka guuleystay Murashaxiinta kale ee Jamhuuriga [Daawo] - iftineducation.com
Doorashada USA: Donlad Trump oo markale ka guuleystay Murashaxiinta kale ee Jamhuuriga [Daawo]
iftineducation.com – Waxaa ay xalay codbixinta is reeb reebka murashaxiinta Xisbiga Jamhuuriga ka dhacay gobalka Nevada, codbixintaasi oo uu si weyn ugu guuleystay Murashaxa Maalqabeenka ah ee Donald Trump.
Guusha uu ka gaaray Donald Trump gobalka Nevada ayaa ah mid muhiim ah isla markaana muujineysa inuu codod ka helay dadka loo yaqaan Hispanic ee kasoo jeeda Latinka oo gobalkaasi ku badan. Trump ayaa horey aflagaado u geystay dadka ka yimaada wadanka Mexico, balse waxaa muuqata inuu weli heysto taageero ku filan.
Trump ayaa ku guuleystay cododka illaa iyo hada la tiriyey 43% cododka, halka ay kaalinta 2aad iyo 3aad ka galeen labada murashax ee kale Marco Rubio iyo Ted Cruz oo kala helay 24% iyo 23%.
Donald Trump ayaa ku guuleystay illaa iyo hada 3 gobal oo kamid ah 4tii gobal ee illaa iyo hada codbixinta is-reeb-reebka ay ka dhacday iyadoo looga guuleystay oo kaliya gobalkii IOWA oo ahaa kii ugu horeeyey codbixinta ka dhacday. Waxaa sidoo kale uu murashaxan uu taageero dheeraad ah kasii helayaa taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga maadaama tartanka ay isaga hareen dhowr murashax oo ka dhex tartamayey xisbigaasi.
Salaasada soo socota ayey dhici doontaa codbixinta ugu balaaran ee is-reeb-reebka murashaxiinta u tartamaya xilka Madaxweynaha maalintaasi oo loo yaqaan (Super Tuesday), waxayna codbixinta ka dhici doontaa 11 gobal oo ay ku jiraan gobalada waaweyn ee koonfurta iyo Waqooyiga dalkaasi Maraykanka.
Murashax Trump oo mar dhaweyd la hadlayey taageerayaashiisa ayaa u mahadnaqay dadka codkooda ku taageeray isagoo markale ku faanay inuu cagta marin doono murashaxiinta kale ee kula tartamaya Murashaxnimada xisbiga Jamhuuriga.
FANAAN HEES U QAADAY GABAR XABASHO AH-DAAWO